[OFFICIAL] dr.fone - Backup okukhetha iOS Data & Buyisela
dr.fone toolkit - Backup iOS Data & Buyisela
Backup & Buyisela iOS Data Ivula Flexible
Enye nqakraza ku yogcino icebo yonke iOS kwi khompyutha yakho.
Vumela kuqala abuyisele nasiphi na umba kwi yogcino kwisixhobo.
Kumazwe angaphandle into ofuna ukusuka ukhuphelo kwikhompyutha yakho.
Akukho ilahleko data kwizixhobo ngexesha ukubuyisela.
dr.fone toolkit - iOS Data Sekela & Buyisela ikuvumela emane backup akubuyisele nantoni na abayifunayo iOS izixhobo / yogcino.
dr.fone toolkit - iOS Data Sekela & Buyisela ikuvumela wenze yonke ukhuphelo lwe phantse yonke i data kwi iPhone yakho iPad, okanye emane ukurhweba ngaphandle data ukuba ufuna ukugcina kwi khompyutha yakho. Xa kukho imfuneko, nani buyisa i data backed up kwisixhobo sakho ngokukhetha izinto ofuna. Kuya kuba kubhetele ukusebenzisa iTunes okanye iCloud.
Backup iPhone yakho / iPad ne One Click
Into yonke backup kuthatha kuphela okukodwa. Xa ifowuni yakho iqhagamshelwe kwaye elibhaqiweyo, iprogram umqwayito wedata ngokuzenzekelayo kwi iPhone, iPad okanye iPod yakho ngaphandle kwebala. Le ifayile elilalela omtsha akayi ukubhala endala. Uyakwazi ukwenza ukhuphelo lwasemva aphp ufuna khona.
Sekela up zonke iintlobo zeefayili
iPhone Backup kwaye Buyisela Ivula Easy
Backup nokubuyisela data iPhone ngokucofa kanye emva ukuqhagamshela ifowuni yakho.
iPhone Iifayile Backup ayiyi kuhlaziywa
Ungenza everyday backup iPhone kwaye zonke iifayile backup bayasindiswa kwaye abayi indawo ezintsha.
Uyakwazi kuqala iinkcukacha zonke iifayile ukhuphelo iPhone yakho nale backup iOS kunye nokubuyisela inkqubo, ukuze ukwazi ukulawula kakuhle iPhone backup yakho.
iPhone Buyisela Ngekhe Ibhala Data wakho
Emva kokuba kuqala, ungakhetha nawuphi na umba ukhuphelo iPhone wakho ukubuyisela kwi iPhone yakho okanye iPad. Ayizi indawo naziphi data ekhoyo kwifowuni yakho.
Kumazwe angaphandle Your iPhone Data
Ukuba ufuna ukufunda okanye ukuprinta data yakho, nani Uyakwazi ukurhweba izinto ukhuphelo yakho iPhone njenge fayile le HTML okanye abanye olifunayo. Ixhomekeke kuwe.
Enoba ukuba usebenzisa i iPhone 7 Plus entsha, iPad Pro, okanye iPhone omdala 4, iPad 1, lo iOS recovery datha isebenzisane ngokupheleleyo yonke imizekelo iPhone, iPad kunye iPod.
Le backup iOS kunye nokubuyisela inkqubo yokufunda-kuphela ngokupheleleyo software. Oku kuthi, aguqule okanye ukuvuza nayiphi na idatha kwidivaysi yakho okanye kwi ifayile elilalela. Sithatha data yakho yobuqu akhawunti nzulu. Wena sihlale njalo umntu kuphela ngubani na ukufikelela kuyo.
Export Data evela Iifayile Eyogcino
Njengoko ku iifayile backup, ungakhetha ukubagcina bonke okanye ukucima naziphi na ukuba awunayo imfuneko. Ngaphezu koko, unakho ukuwufunda kuqala kwaye ngaphandle naziphi na izinto ukusuka ifayile elilalela kwi computer yakho, uze ugcine njengoko HTML, CSV okanye vCard iifayile.
Ubuye ubuyisele data kwi yakho izixhobo iOS lula.
Ayikho ukulahleka data
Akukho data ezilahlekileyo ngexesha backup, amazwe okanye buyisela.
iOS Data Backup & Buyisela Works for All iOS Izixhobo
iifomati zefayile Export
abafowunelwa kumazwe angaphandle kunye imiyalezo kwi khompyutha njengoko CSV, .html, okanye vCard;
Export WhatsApp imiyalezo kwi khompyutha njengoko CSV okanye .html;
Rhweba call yelog, amanqaku, ikhalenda, izikhumbuzo kunye ibhukmaki Safari ukuba ikhompyutha .html.
3 Iindlela ukuba Notes Eyogcino kwi iPhone ne iPad
Yintoni iTunes Eyogcino?
Indlela Yokubuyisela whatsapp Backup on iPhone kunye nezixhobo Android
Iindlela ezimbini Nabo iCloud Eyogcino
Indlela Backup Idatha kwi Loka iPhone 7 (Plus) / SE / 6s (Plus) / 6
Indlela Yokubuyisela evela iTunes Eyogcino
iPhone yeSistim Extractor: Caphula kwaye Buyisa iPhone Data
Iindlela 4 Nabo iPhone Backup kunye / ngaphandle iTunes
Indlela Yokufumana iPhone Yogcino Indawo Cima ngokulondoloza
Buyisa abafowunelwa elahlekileyo okanye icinyiwe, imiyalezo, iifoto, amanqaku, njl iPhone, iPad kunye iPod.